क्याप्टेन निश्चल केसीले उडाएका थिए दुर्घनाग्रस्त हेलिकप्टर, को-को थिए ६ जना यात्रु ? (नामसहित) — Sanchar Kendra
क्याप्टेन निश्चल केसीले उडाएका थिए दुर्घनाग्रस्त हेलिकप्टर, को-को थिए ६ जना यात्रु ? (नामसहित)
छ जना यात्रु बोकेर गोरखाको सामागाउँबाट काठमाडौंका लागि उडेको अल्टिच्यूड एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको भएको छ ।
सो हेलिकप्टर धादिङको रि गाउँमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको एल्टिच्यूड एयरका सञ्चालक फुर्बा शेर्पाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ए एल एच ओके कलसाइनको सो हेलिकप्टर क्याप्टेन निश्चल केसीले उडाएका थिए ।
हेलिकप्टरमा पाइलटसहित एक जापानी नागरिक र ५ नेपाली सवार रहेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय सामागाउँ प्रहरी चौकीका अनुसार हेलिकप्टरमा सवार रहेकामा जापानी नागरिक हिरोमी कोमात्सु, रामेछापका डिल्ली बहादुर गुरुङ, दोलखाका हिरा शेर्पा, गोरखाका ल्हो आनी डाेल्पा डिक्की, छोवाङ नुर्बु र सुनिल तामाङ छन् ।
यता, धादिङ प्रहरी प्रमुख डम्बर बिसीले भने नुवाकोट र धादिङको सीमामा हेलिकप्टर फेला परेको भन्ने प्रारम्भिक सूचना आफूहरुलाई प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता प्रतापबाबु तिवारीका अनुसार नाइनएनएएसएल (9NALS) कल साइन भएको उक्त हेलिकोप्टर शनिबार बिहान ८ बजेर ५ मिनेट जाँदा सम्पर्कविहीन भएको थियो।
उद्धारका लागि गएको अल्टिच्युड एयरको अर्को हेलिकोप्टर खराब मौसमका कारण फिर्ता भएको र खोजीको प्रयास भइरहेको प्रवक्ता तिवारीले बताए।